Nisandoka ho talen’ny ministera : tratra ilay mpisoloky ireo mpampianatra Fram | NewsMada
Nisandoka ho talen’ny ministera : tratra ilay mpisoloky ireo mpampianatra Fram
Mafy ny te ho mpiasam-panjakana, tsy kely lalana koa ny ratsy! Mpampianatra Fram efa anjatony mahery voasolokina lehilahy iray mitonona ho tale ao amin’ny minisiteran’ny fanabeazam- pirenena (Men).
Vao 28 taona monja ity tovolahy nisandoka ho Directeur des ressources humaines na DRH ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam- pirenena (Men) ity, voasambotry ny polisy misahana ny ady amin’ny heloka bevava sakelika fahadimy, eny Anosy, ny zoma 23 desambra teo, tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany maraina teny Ambohitrimanjaka.
Mpampianatra mpiasampanjakana avy eny Ambohitrimanjaka iray nikarakara taratasy tany amin’ny minisiteran’ny fanabeazam- pirenena Anosy, gaga raha nahita fa hay mbola ilay DRH taloha ihany ny niasa tao. Ity farany indray avy eo no nitantara taminy fa misy lehilahy mitonona ho DRH n’ny Men vaovao mivezivezy eny Ambohitrimanjaka, milaza fa mahatafiditra ireo mpampianatra Fram ho mpiasam-panjakana raikitra.
Tonga nametraka fitoriana tao amin’ny BC 5 Anosy ny DRH tena izy, ny alakamisy 22 desambra. Natao ny vela-pandrika rehetra ka tratra tao an-tranony teo am-pakana vola tamin’olona iray ilay tovolahy. Mbola nahitana antotan-taratasin’olona efa ho 100 mahery sy fitomboka sandoka ary karatra hosoka tao aminy tamin’ny fisavana ny tranony.
Tamin’ny famotorana natao azy no fantatra fa reseny lahatra izay mpampianatra Fram mifanena aminy ka ampisehoany karatra maha tale azy. Rehefa resy lahatra ilay olona, asainy mikarakara “dossier” sy manomana vola 150 000Ar ka hatramin’ny 200 000 Ar ho saram-pikarakarana. Nilaza ihany ilay tovolahy ity fa efa marobe tsy voaisany intsony ny olona nahazoany vola. Natolotra ny fampanoavana, omaly alatsinainy, izy.
Anatin’izao toe-draharaham-pirenena anaty krizy sy mafampana eo amin’ny lafiny politika izao, marobe ny mpanararaotra ny fahasahiranan’ny olona, indrindra ireo maniry mafy ho lasa mpiasam-panjakana, ny mpanao fifaninanana fanadinam-panjakana, sns. Ny olon-tsotra mahay misoloky, mampiasa teti-dratsy hametsena ny efa sahirana. Ankoatra ny mpisoloky tahaka ity voalaza etsy ambony ity, misy ihany koa ireo mpanao kolikoly ambadik’ireny fanadinam-panjakana ireny. Maro ny mitaraina fa misy ny mitaky vola ho takalom-pahafahana fanadinana. Voalaza fa miasa ny Bianco, sns kanefa tsy mahasakana na kely akory aza ny kolikoly amin’izany. Tsy mahagaga raha fanakianana sy fahakiviana no asetrin’ny olona ny fanjakana, ny Bianco, sns. Ny aza voany ihany.